ဖြစ်ရပ်မှန် Archives - Padaethar
မိန်းကလေးများ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့….( တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ )
December 11, 2020 by Padaethar
မိန်းကလေးများ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့။ (တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ) ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကတကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ….သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးသင်ခန်းစာယူသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေပေးတာပါ ကျောင်းသင်ခန်းစာဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က အချိန်အကုန်ခံပြီး လေ့လာသင်ယူကျက်မှတ်ရပါတယ်. ဘ၀နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာကိုတော့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ နေ မြင်နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်က အဲ့ ဒီလိုအမှားမျိုးမဖြစ်အောင် သတိနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်ရင်တော့.. ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့ အလကားရတဲ့ အမြတ်ပေါ့နော်…ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအလကားရတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်.. မနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ ကောင်မလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ နယ်ကနေလာပြီးဘန်ကောက် မြို့ ပေါ်မှာကျောင်းလာတက်ရင်းနဲ့ Online ပေါ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. နောက်တော့ချစ်သူအမေရိကန်ိန်င်ငံသားက ဘန်ကောက်ကိုအလည်ရောက်လာပါတယ်….အတူသွားအတူအတူတူနေပြီးသိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဗီဇာသက်တန်းကုန်တော့အမေရိကားကိုပြန်ရတော့မှာမို့ ကောင်မလေးက မပြန်ခင်သူမကို တရားရုံးမှာ ….. ဇနီးမယားအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးသွားပါလို့ တောင်းဆိုတော့ ကောင်လေးက သူလက်မှတ် မထိုးပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ သူ့ မှာဇနီးရှိပါတယ် လို့ ပြောတော့ကောင်မလေးက … Read more
မိန်းမ ယူပြီးမှ ချီးစားစုန်း မှန်းသိ၍ ပြန်ကွာရှင်းခဲ့ရသူ
မိန်းမ ယူပြီးမှ ချီးစားစုန်း မှန်းသိ၍ ပြန်ကွာရှင်းခဲ့ရသူ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၅၀ ခန့်(ခန့် မှန်းခြေသာ ) .. မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ဧရာဝတီ တိုင်း ၊ (အင်းရဲ ကြီး – အင်းရဲလေး ) ကြားရှိရွာလေး တစ်ခုဖြစ်ပြီး ငါးများပေါများစွာ ထွက်ရှိရာ ရွာလေးဖြစ်ပါသည်… ထို ရွာတွင် တောင်ယာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်.. ထိုရွာတွင် ကိုဖိုးမောင်တို့ဇနီးမောင်နှံကို တော့ ၄င်းတို့ ရွာ၏ စံပြဇနီး မောင်နှံဟု ပြောစမှတ်ပြုကြပါသည်… အဘယ့်ကြောင်းနည်းဟု ဆိုသော် သူတို့ ဇနီးမောင်နှံသည် “မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက် ”ဟုသော စကားပုံနှင့်အညီတဦးကိုတစ်ဦးချစ်ခင်ပြီးအလုပ်ကိုကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်..။ … Read more
ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီးအစိမ်းသေခဲ့ရတဲ့ သနားစရာ ချစ်သူစုံတွဲ သရဲ (နှလုံးရောဂါရှိပါက မဖတ်ရ)
October 29, 2020 by Padaethar
လူစားလွန်း၍ ခွေး ကို လူအစားကျွေးလိုက်ရတဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် လူစားတဲ့ ဘီလူးမတံတား (ဖြစ်ရပ်မှန်)
ရခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်တွေမြို့က “ဘီးလူးမတံတား”အကြောင်းလေးပါ.။ ဘီလူးမတံတား ဆိုတာက တံတားအတိုလေးပါ ပဲ..။ဒါပဲမဲ့ ဘီးလူးမတံတား ဆိုတဲနာမည်အတိုင်း လူစားပါတယ်..။ တစ်နှစ်မှာလူနှစ်ယောက်ကအနည်းဆုံးကားတိုက်ပြီးသေကြတယ်။တံတားက ၄လမ်းသွားပါ။ဒါပဲမဲ့ ရန်ကုန်လိုအသွားတစ်ဖက်၊အပြန်တစ်ဖက်မဟုတ်ဘူး..၊ကြိုက်သလိုသွားလိုရတယ် မခွဲထားဘူးပေါ့။ ကားတိုက်မှု ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင် ညရောက်ရင် တံတားဖက်ကအသံနက်ကြီး နဲ့“ဟေး…..ဟေး….. ”ဆိုပြီးဝမ်းသာသံလိုတစ်ခါ တစ်ခါ…“ဟီးးးးးးးးးးးး…….အီးးးးးးးးးးးးး…အားးးးး” ဆိုပြီးညည်းသံလိုလို တစ်မျိုး အော်သံတွေကြားရတယ်။တံတားဖက်ကအော်သံတွေကြားရရင် မကြာဘူး လူသေတာပဲ။ကားတိုက်မှု့တစ်ခုဖြစ်တော့ အထူးအဆန်းကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ ကားမောင်းသမား က ပြောပြတယ်…။ သူကားရှေ့မှအရမ်းလှ၊ ဆံပင် အရှည်နဲ့ အစိမ်းရောင်အ၀တ်ဝတ်ထားတဲ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရပ်နေလို့ သူရှောင်လိုက်တာ ပလမ်ဖောင်းပေါ်ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူကိုကားတိုက်မိသွားတယ်တဲ့…။ အဲ့ ကောင်မလေးကို မတိုက်ချင်လို့ ရှောင်ရင်း မှောက်သွားတာပါတဲ့…။ကားတိုက်ခံရရင်လည်း သေတဲ့လူများတယ်၊ရှင်တဲ့လူမရှိသလောက်ပဲ။ ခဏခဏအဲသလိုဖြစ်နေတော့ ရပ်ကွက် ကစုပြီး (၇) ရက်ပတ်လုံးလုံး တရားနား၊ပရိတ်ရွတ်တယ်။ပြီးတော့ ဘုန်ကြီးတွေအလှည်ကျနေ့နေ့ညည တံတားပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီးပရိတ်ရွတ်ကြတယ်။ နောက်ပြီး အရပ်ထဲက သက်ကြီးဝါကြီးတွေရဲ့ စကားအရ … Read more